Eyona miboniso mibini ye-Apple TV + ibekwe ngoku: Ukusuka eTed Lasso ukuya kulo lonke uluntu - Itv
Eyona Itv Eyona miboniso mi-5 mikhulu yeTV kwi-Apple TV +, ikwinqanaba
Eyona miboniso mi-5 mikhulu yeTV kwi-Apple TV +, ikwinqanaba
Ngaba iApple TV + kufanelekile ukuba uyihlole? Siphikisana ewe.I-Apple TV +
I-Apple TV + yinkonzo yokusasaza enzima ukuyivavanya ngokufanelekileyo. U-Apple ngokungathandabuzekiyo uyala ukuveza nakuphi na ukubonakala kohlaziyo lokukhula kwababhalisi, uninzi lwabathengi abasasazayo ixelwe Ukusebenza kwimirhumo yasimahla abangacwangcisi ukuyivuselela, kwaye ababoneleli beshishini abalindelanga iqonga sisinde kumlo ekuthiwa kukusasaza iimfazwe . Oko kukuthi kungaphantsi kokulungileyo njengoko kuvela kwindawo yokuthengisa.
Kodwa ukuba sijonga iApple TV + ngokungqongqo ngokusebenzisa ilensi esemgangathweni yokuyila, kukho impikiswano ekufuneka yenziwe ukuba umlinganiso wokubetha kwawo kuthotho lweTV lwangempela luphezulu kuneNetflix. Ngaphandle kwelayibrari enelayisensi yemiboniso esele ikhona kunye neemovie, iApple TV + ixhomekeke kuphela kwinkqubo yoqobo. Ngelixa oko kunokuba negalelo kumzabalazo we-streamer, kukhokelele kwilayibrari ekhulayo ye-eclectic kunye ne-TV yantlandlolo ehambelana nokuhlola. Ukunceda, nantsi eyona miboniso mihlanu ilungileyo ye-Apple TV + ukuqala ngayo.
Ixesha lesibini elizayo . Asinakuhlala siyithetha loo nto malunga ne-glutton yezinye izinto ezingumsasazo ezifika mihla le kwiminyango yethu yedijithali.
Kwinqanaba leendawo zokusebenzela ezihlekisayo, Ukufuna intsomi kwindawo ethile phakathi kwe-NBC Ivenkile Enkulu kunye neeHBO Intlambo yeSilicon . Kukho ukukrola okanye ezimbini zentetho elungileyo zosasazo lwendalo ngelixa uburharha obukhali kunye nobuchazayo bokugqibela buninzi kulo lonke. Ikwabethelele ngokukodwa ukuvalelwa kwayo ngendlela ekhethekileyo engenye.
Ixesha lesibini le-2 ngoMeyi.
Inkwenkwezi yedabi iGalactica qalisa kwakhona kwaye Ukugxekwa (Okulandelayo, mnike okwakhe Idabi leenkwenkwezi uthotho! ). Indoda iyinkosi ye-sci-fi eyomeleleyo, ekhuthazwe ngumlinganiswa, yiyo kanye loo nto Lonke Uluntu ngu.
Apha, uMoore uhambise into ezimbini: yimbali engenye apho iSoviet Union yabetha iMelika enyangeni kwaye ugqatso lwendawo aluzange luphele, olukhokelela kwinkqubela phambili kwezobuchwephesha nakwingcinga entsha yezopolitiko. Olu chungechunge lubuza umbuzo owuthandayo woluntu, ungathini ukuba? , Ngelixa ujongana nokunxibelelana okuyinyani koluntu kunye netekhnoloji. Kwangelo xesha, yakha uphuhliso ngalunye olukhulu emiqolo yabalinganiswa bayo, isebenzisa iihambo zabo ezizodwa njengeminyango esecaleni yoyilo kwimibuzo emikhulu yobomi.
Lonke Uluntu Kutshanje kusongelwe ixesha lesibini kwifashoni ekhazimlayo.
Beka iAluminiyam ngaphandle: Iizinto ezili-10 zokuLungisa iNdalo ukuzama
I-Million-Dollar Hobby: Ngaphakathi kwihlabathi leBig-Money Bridge
Ngaba u-superman uza kuba kwi-movie yeligi yobulungisa
Ndiyathemba ukuba le imeyile ikufumanisa usenza kakuhle
iimfazwe zamakhaya john paul mhlophe
evan rachel wood ukuya ehlathini
Ngaba icaffeine ikwenza uchame ngakumbi
Lizakuba nini ixesha elitsha lokungabi nazintloni kwi-Netflix